OTU ESI ACHỌPỤTA NSỤGHARỊ BIOS - WINDOWS - 2019
Otu esi achọpụta nsụgharị BIOS
Ọ bụrụ na ị kpebie imelite BIOS na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ, mgbe mbụ, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịchọpụta ụdị mbipute BIOS ka ọ dị ugbu a, mgbe nke ahụ gasịrị, gaa na ebe nrụọrụ weebụ nke onye ọrụ ahụ iji hụ ma ị nwere ike ibudata ụdị ọhụrụ ahụ (ntụziaka ahụ dakwara ya Na mgbakwunye, ị nwere agadi motherboard ma ọ bụ ọhụrụ na UEFI). Nhọrọ: Otu esi emelite BIOS
Ana m achọpụta na usoro mmelite maka BIOS bụ ọrụ nwere ike ịdaba na ya, ya mere ọ bụrụ na ihe niile na-arụ ọrụ nye gị, ọ dịghịkwa mkpa ka imelite, ọ ka mma ịhapụ ihe niile dị ka ọ dị. Otú ọ dị, n'ọnọdụ ụfọdụ enwere mkpa dị otú a - M onwe m nwere naanị mmelite BIOS maka ịnagide mkpọtụ nke onye nlekota na tebụl, ụzọ ndị ọzọ abaghị uru. Maka ụfọdụ nne na nna ochie, mmelite ahụ na-enye gị ohere ịmeghe ụfọdụ atụmatụ, dịka ọmụmaatụ, nkwado nkwado ụmụ agbọghọ.
Ụzọ dị mfe iji chọpụta nsụgharị BIOS
Ụzọ kachasị mfe bụ ịbanye na BIOS ma hụ mbipute ahụ (Otu esi aga Windows 8 BIOS), Otú ọ dị, nke a nwere ike ịme ngwa ngwa na Windows, na ụzọ atọ dị iche iche:
Lee mbipụta BIOS na ndekọ (Windows 7 na Windows 8)
Jiri mmemme ahụ iji lelee nkọwa kọmputa
Iji akara iwu
Nke kachasị mfe maka iji - kpebie onwe gị, m ga-akọwakwa nhọrọ atọ niile.
Lee mbipụta nke BIOS na Editor Windows
Malite nchịkọta akụkọ, maka nke a ị nwere ike pịa bọtịnụ Windows + R na keyboard wee banye regeditna ọsọ ọsọ.
Na nchịkọta akụkọ, mepee ngalaba HKEY_LOCAL_MACHINE HARDWARE DESCRIPTION BIOS ma lee uru nke BIOSVersion parameter - nke a bụ mbipụta BIOS gị.
Jiri usoro ihe omume ahụ iji lelee ozi gbasara motherboard
Enwere ọtụtụ mmemme nke na-enye gị ohere ịchọpụta akụkụ nke kọmputa ahụ, gụnyere ozi gbasara motherboard, nke anyị nwere mmasị. Edere m banyere mmemme ndị dị na isiokwu Otu esi chọpụta àgwà nke kọmputa.
Ihe omume ndị a niile na-enye gị ohere ịchọta nsụgharị BIOS, m ga-atụle ihe kachasị mfe n'iji ụdị ọrụ bara uru Speccy, nke ị nwere ike ibudata site na saịtị ọrụ site na http://www.piriform.com/speccy/download (ị nwekwara ike ịchọta nsụgharị na-agagharị na Nwepụta ngalaba) .
Mgbe nbudata usoro ihe omume ahụ ma malite ya, ị ga-ahụ windo na isi nke kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ. Mepee ihe "Mbadamba" (ma ọ bụ Mbadamba). N'ime windo na ozi gbasara motherboard ị ga-ahụ ngalaba BIOS, na ya - mbipụta ya na ụbọchị ịhapụ ya, nke ahụ bụ kpọmkwem ihe dị anyị mkpa.
Jiri akara iwu iji chọpụta nsụgharị ahụ
Ọfọn, ụzọ ikpeazụ, nke nwekwara ike bụrụ ihe ka mma karịa mmadụ abụọ gara aga:
Gbaa ọsọ ọsọ. Enwere ike ime nke a n'ụzọ dị iche iche: dịka ọmụmaatụ, pịa igodo Windows + R ma pịnye cmd(wee pịa OK ma ọ bụ Tinye). Na na Windows 8.1, ịnwere ike ịpị igodo Windows + X wee họrọ akara iwu site na menu.
Tinye iwu wmicbiosnwetasmbiosbiosversion ma ị ga-ahụ ozi BIOS mbipute.
Echere m na ụzọ ndị a kọwara ga-ezuru iji chọpụta ma ịnwere mbipute ọhụrụ na ma ọ ga-ekwe omume imelite BIOS - jiri nlezianya mee ya ma jiri nlezianya gụọ ntụziaka nke onye nrụpụta ahụ.